June 18, 2010 na 6:30 na
Ekele. Ị ga-enwe ụfọdụ n'ezie na-atụkwasị obi beta testers onye ka ị na-agba ọsọ gị stof na ha ndụ BuddyPress saịtị… 8^)
June 19, 2010 na 4:19 obi
Ee, thanks for that 😉
June 20, 2010 na 4:43 obi
Ị bụ kasị welcome N'ezie! Ndenye ajụjụ: Bụ n'ebe ọ bụla n'ụzọ nke inhibiting nsụgharị nke koodu snippets dị ka http://virtualcrowds.org/zh/ ?
June 20, 2010 na 7:48 obi
M nwere ike ike ụfọdụ interface nke ga-ekwe na, ma onye ga-eme koodu mgbanwe na-akwado ya, M ga-etinye ya na a elu mkpa nnọọ ma
June 21, 2010 na 1:36 na
Aghọtara m. Ya ihe iberibe onye na-, ọ bụ ezie na ọ na-eleghị anya ga-akwụsị a otutu web mmepe iji Transposh. Gị oku. Ị nwetara n'ụzọ map!
June 22, 2010 na 11:04 obi
M chọpụtara na ọ na-agba mbọ na-asụgharị URLs, nke na-eme mba uche, n'ezie. Ha ga-anọ kpọmkwem dị ka bụ. Lee ihe na-eme ebe a… http://virtualcrowds.org/zh/2010/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%9A%84Blogger/yoast-seoktoberfest-2010-looking-forward-to-it/. Echere m na a otutu nke saịtị na-agaghị na-ebipụta HTML / PHP koodu ma ọ bụ URLs na ọ bụghị-ejide site a ma m were na e nwere ihe a otutu blọọgụ na-eme.
June 21, 2010 na 3:07 na
Nke a bụ oké kwalite maka Transposh.
Enwere m ajụjụ,bụ ịsụgharị peeji nke na-echekwa dị ka post na-adịgide adịgide?
n'ihi na m na-esi retranslate maka otu post.
June 21, 2010 na 10:08 na
Nsụgharị na-azọpụta, M na-enyocha gị na saịtị na ya anya ok, ọ pụrụ retranslate ma ọ bụrụ na ọdịnaya agbanweela ma ọ bụ ihe ọzọ wee na-ezighị ezi.
June 22, 2010 na 5:44 na
ekele.. m ga-eso update nke a plugin. Ukwu plugin..
July 9, 2010 na 7:19 na
Lee ihe dị ịtụnanya plugin! M arụnyere ya na http://www.impacollective.org website m haziri ma bụ n'ezie masịrị! Gbaa Ọsọ n'ime a snag i! Mgbe arụnyere, na plugin mere ọhụrụ m ọrụ ndebanye-ada! Ọ ga-agabigaghị mbụ ihuenyo ma ọ bụ zipu e-Gburu. M na-eweta nke a na saịtị na World Dance Alliance ogbako na NYC ndị si gburugburu ụwa a na-abịa izu. M na-agba ọsọ WPMU 3.0 na BP 1.2.5.2 na banyere 20 plugins. Ohere ọ bụla onye ga-amasị-enyere m aka chepụta ogu? Ga-amasị m na-agụnye nke a mma na ngosi.
July 9, 2010 na 7:20 na
P.S. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka m re-wụnye ya na ị pụrụ ịhụ nke, ma ọ bụ mkpa ọ bụla, dị nnọọ ka m mara!
July 9, 2010 na 10:28 na
Ga-enwe obi ụtọ na-agbalị na-enyere gị aka n'ebe, ihe bụ kpọmkwem njehie gị ọsọ n'ime?
July 9, 2010 na 7:27 obi
Mgbe plugin nọ n'ọrụ, bọtịnụ na ala nke ọhụrụ ọrụ ndebanye peeji nke mgbanwe. Na-enweghị plugin arụnyere, ọ na-agụ “Complete Ama Up” na ọrụ nwere ike pịa ya n'ihu na ndebanye usoro. Mgbe plugin nọ n'ọrụ, bọtịnụ mgbanwe na-agụ “Nyefere Ajụjụ.” Mgbe onye ọrụ ahụ na-agbalị gaba site na ịpị bọtịnụ, na peeji nke nwetaghachi ume na ihe ọ bụla na-eme… N'ụzọ ụfọdụ, ndị plugin na-agbanwe agbanwe na bọtịnụ na idufu m na-eche…??? M reactivated na plugin maka ụbọchị otú i nwere ike ịhụ “n'okpuru Ajụjụ” mgbanwe ke edinam. Na-ekele unu nke ukwuu maka na-ele anya na nke a. Ndị si gburugburu ụwa ga-achọ na a ika ọhụrụ na saịtị! na gị plugin ga Chaị ha!
July 9, 2010 na 10:35 obi
Dị nnọọ ihe updaate… M nwere nkwarụ niile plugins ma e wezụga ndị BP na Transposh na ka nwere nke!
July 9, 2010 na 11:45 obi
Daalụ, M bụ ike emepụtaghachi ahụhụ m na gburugburu ebe obibi, ga-ekwe ka ị mara mgbe ya ofu.
July 10, 2010 na 12:35 na
Hụrụ ahụhụ na buddypress isiokwu
anya na faịlụ
Chọọ maka “Complete Sign Up”
Lee efu mbara n'etiti ụdị na aha
ọhụrụ akara kwesịrị
-Kọrọ upstream: http://trac.buddypress.org/ticket/2516
July 10, 2010 na 4:40 na
Ọ na-arụ ọrụ ugbu a! Daalụ! M ga-biputere theinfoe na buddypress arịrịọ maka nkwado m mere. Ha nwere ike idozi ya na-esonụ kwalite. M ga-biputere a njikọ gị na saịtị na m na-ekele gị na peeji nke! Ị nwere a onyinye njikọ m nwere ike iziga ụfọdụ nkwado maka mmepe na-? Ọzọ, Daalụ nke ukwuu!
July 11, 2010 na 11:35 na
Ekele Scott, ọ bụ m ụtọ aka,
biko akwado mmepe site na ime ka anyị mara nke ọ bụla ọzọ mbipụta ị na-ezute na ihe ọ bụla echiche unu nwere ike!
Ndị a na-ekwu,
August 1, 2010 na 12:22 obi
M na-agbalị ịchọta ụzọ na-akwado ma Thai na English m nonprofit BuddyPress saịtị, Zanyiza. Nke a bụ ụka n'Ịntanet saịtị wuru maka Akha agbụrụ ndị Northern Thailand. Anyị chọrọ ịbụ ike ide na Akha asụsụ, nakwa, nke na-eji Roman odide.
Otú ọ dị, M ike ịhụ ebe aka dezie ederede, dị ka akpaaka translation bụghị mgbe niile ezi (atụ, ya sụgharịta okwu “ikori” n'ime Thai okwu na “pusi”!)
M na-ahụ na FAQs na “A asụsụ akara nke-edezi ga-ekwe ka onye nsụgharị (onye ọ bụla nke akara ke 'ndị nwere ike ịsụgharị' nkeji) aka na aka dezie page. I.E. na ịsụgharị ego-igbe ga-apụta na wijetị.” Otú ọ dị – M na-adịghị ahụ ebe akara a asụsụ edezi bụla.
Anyị na-agba ọsọ na-WordPress 3.0.1 Mu na a BuddyPress Ọkà mmụta isiokwu.
M na e-arụ ọrụ na a asụsụ ngwọta maka izu ugbu a… site WPML, qTranslate na ole na ole ndị ọzọ ma na-abịa azụ Transposh. Biko nyere aka!
August 1, 2010 na 12:43 obi
Akpa ajụjụ, a asụsụ akara maka edezi ga-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, wijetị ga-egosi na edit translation checkbox, ụzọ dị mfe iji nwee nke a bụ iji mee ka amaonye translation.
Nke abụọ ajụjụ, na-agbakwụnye Akha, ị ga-dezie constants.php faịlụ iji nweta na